Koreen hoji raawwachiistuu ADWUI dhimmoota siyaasaa fi kallattii gara fuula duraarratti mari’ate – Fana Broadcasting Corporate
Koreen hoji raawwachiistuu ADWUI dhimmoota siyaasaa fi kallattii gara fuula duraarratti mari’ate
Finfinnee, Waxabajjii 11,2011(FBC)- Koreen hoji raawwachiistuu Adda Demokraatawa Warraaqsa Ummattoota Ityoophiyaa(ADWUI) dhimmoota siyaasaa fi kallattii gara fuula duraarratti mari’ate.
Waajjirri Mana Maree ADWUI akka beeksisetti koreen hoji raawwachiistuu addichaa kaleessa Waxabajjii 10,2011 walga’ii gaggeessen haala siyaasaa biyyattiirratti mari’achuudhan kallattii gara fuula duraa kaa’era.
Korichi hojiilee siyaasaa waggaa 1, haala waqtaawaa siyaasa biyyattii, dhimmoota xiyyeeffannaa gara fuula duraarratti mari’ateera.
Milkiiwwan hedduun galmaa’anis, nageenyi boora’uu, kutannoon hoggansaa xiqqaachuu, aktiiviistummaa fi gaazexeessummaan walkeessa laaqamuun akka rakkootti gamaaggamameera.
Dhaabbileen walabaa fi ga’umsa qaban ijaarramuu dhabuu, dhimmoota jajjaboo biyyaarratti ejjennoon waloo xiqqaachuu, bulchiinsi mootummaa bu’a qabeessi cimuu dhabuun gamaaggamameera.
Rakkoolee mudatanis sirna paartii hedduminaarratti gufuu uumaa jiraachuun ilaallameera.
Paartileen morkattootaa fi waldaaleen hawaasummaa ijaarsa demokraasiif gumaachi taasisaa jiran gamaaggamamee, sochiin walabaa uumamus ga’umsa dhaabbattummaa dhabuun isaanii akka hanqinaatti muul’ateera.
Paartileen baay’achuudhan ala ajandaa waldhahaan gufuu sirna paartii hedduminaa ta’uu waan danda’uuf, daran irratti hojjetamuu akka qabu eerameera.
Ijaarsa sirna demokraasii fi filannoo walabaa fi bilisaaf hojjetamuu akka qabu kallattii kaa’era.
Obbo Gadduun, Aniikan Huuyit Falditii fi jila isaanii waliin mari’atan
Wiirtuun Yaala Kaansarii Finfinneetti ijaarramuufi
Koreen giddugaleessaa SDTUG dhimmoota dhaabbattummaarratti mari’achaa jira